Waa maxay Webi
Waa maxay "Webi"..?!!, Sidee ayuuse u yaallaa..?!!!
WQ: Muxyaddiin M.Kaalmoy
Sannad-dugsiyeedkii 1997/1998-kii ayaa waxaa aan ka shaqaynayay oo "Bare" ka ahaa dugsi ka mid ah dugsiyada degmooyinka Gobolka "Al-jowf " ee dalka Yemen. Gobolkaas oo ku yaalla xuduudda Yemen ay la leedahay dalka Sacuudiga; dadkiisuna badanaaba ay yihiin Qabaa'il reer-Baadiye ah oo Xoolaley iyo Beeraley isku-dhafan ah.
Maalin maalmaha ka mid ah, aniga oo goor casar-gaabad ah fadhiya hoos-galbeedka aqalkii aan degmada ka degganaa, dhabtana ku heysta "Radio", oo ka dhegeysanaya warkii oo ka socday Laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da, ayaa waxaa i soo ag-fariistay Oday reer-Baadiye ah , oo aannu meesha deris ku ahayn; da'diisuna ahayd markaas qiyaastii dhowr iyo toddobaatan jir.
Markii Odaygu uu cabbaar i ag-fadhiyay, arkayna inaan dhegeysigii dhammeeyay, oo demiyay Raadiyihii, ayuu igu yiri:- " Ustaad, maxaad ka dhegeysaneysay Raadiyaha..?. Waxaan u sheegay inaan ka dhegeysanayay wararkii ugu dambeeyay ee " Somalia". Wuxuu igu yiri:-" Hadda xaaladda dalkiinna Soomaaliya waa sidee ? Dagaalladii sokeeye ee xaggiinna laga sheeg-sheegayayse xaggee ayay marayaan ?!!. Waxaan Odayga reer-baadiyaha ah siiyay jawaab waafaqsan Su'aashiisa, oo uu isaguna qaadi karayo, oo uusan fahamkeedu ku cuslayn.
Wuxuu haddana i weydiiyay Su'aal la xiriirta; Sida iyo Waxa ay dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin, iyo wixii Hanti ah ee ay Soomaalidu leeyihiin ..? Waxaan u bilaabay Odaygii, inaan si kooban wax uga taataabto nolosha iyo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed. Waxaan soo hadal-qaaday, inay Soomaaliya tahay dalka labaad ee ugu xeebta dheer Qaaradda Afrika; Xoolo la dhaqdo, Ugaar( duur-joog ) aan xad lahaynna leedahay; Dhul-beereed carra-san ah oo ballaaranna uu dalku leeyahay; kuwaas oo aad uga badan Soomaalida, marka loo eego tiradooda. Waxaan kaloo xusay inuu jiro khayraadka dhulka hoostiisa jiifa oo dihin, welina ayan dadka Soomaaliyeed la soo bixin.
Wuxuu Odaygu i yiri:-" Ma annaga oo kale ayaad Beeraha ku waraabsataan Ceelal ? Mase roobabka xilliyada ayaad la beegsataan ?. Waxaan u sheegay, walow ay jiraan beero-roobaad, haddana inuu dalku leeyahay laba "Webi", oo ay Beeralayda ku dhow-dhow qaarkood ku waraabsadaan Beerahooda, laga dhaansado, Xooluhuna ka cabbaan Webiyadaas.
Wuxuu Odaygu la soo booday Su'aal ahayd : Waa maxay Webi ? Sidee ayuu u yaallaa ? Ma Balli baa, mase waa Baxar (Bad) ?!!!. Yaabkii ayaa i hareeyay oo weydiintaas ayaan filan kari waayay. Hawl aanan yarayn ayaa waxay iga qabsatay sharraxaadda "Webi", waxaanse ugu soo koobay oo iri:-" Webigu waa sida Waadigan ( Toggan ) degmadiinna dhex-maraya , oo ay biyo xareed ahi, si joogta ah uga buuxaan oo kale. Dalal badan oo dunida ah ayaa sida Soomaaliya oo kale leh Webiyo, sida;- Suudaan, Masar, Ciraaq, Ruushka, Shiinaha, Maraykanka iwm.
Inta uu Odaygii qumaati ii soo fiiriyay, si la-yaab lehna dhegaha u taagay, ayuu igu yiri:-" Hadde, maxaa adiga meeshan ku dhigay ?!!!. Maxaase waalaya oo wad-wada Soomaalidan dhulalka Carbeed ee lama -degaanka ah u soo yaacaya, ee uu dalkooduna u yaallo oo u eg-yahay sida aad tilmaamayso Ustaadow ?!!!.
Waxaan u sheegay Odaygii; in ayan dadka Soomaaliyeed ee Yemen joogaahi, ka soo cararin gaajo, Carabahana ayan u soo doonan "Cunno", balse ay ka soo yaaceen dagaallada sokeeye ee dalka( Somalia) ka jira iyo waxyeelladiisa ee ay degganaansho-darridu ka midka tahay.
Inkastoo aan ilaa xad waabiyay Odayga, haddana wuxuu u muuqday ruux aanan ku qancin oo ayan ka daadegin casharka aan u dhigayo; aniga ayuuna bilaabay inuu Cashar kale ii mariyo oo igu dul-aqriyo; wuxuuna isagoo sii kacaya oo taagan igu yiri:- " Ma adinka oo Xeeb dheer, Dhul-beereed, Xoolo aan tiro lahayn, Ugaar, Webiyo buuxa iyo Kheyraadka dhulka hoos-jiifa...adinka oo intaas oo dhan leh miyaad dhulkiinnaas barwaaqada ah uga soo cararaysaan xabbad ay ridayaan tiro yar oo dad ah oo uu damac wado ..?!!!. Maad u midowdaan, iska qabataan, meelna uga soo wada jeesataan..?!!!"
Wuxuu Odaygu intaas raaciyay oo uu yiri:-" Ustaad, waxaan maqlay, xitaa Ariga tirada badan ee Yemen soo gala, laguna magacaabo "Barbarii" inuu xaggiinna Somalia ka yimaado, taas ma jirtaa ?!!. Waxaan ugu jawaabay haa wa dhab, oo Arigaas wuxuuba wataa magaca magaalada dakaddeeda laga soo dhoofiyo , oo ah "Barbara" oo Woqooyiga Soomaaliya ku taalla.
Wuu iska sii socday Odaygii, isagoo aan xitaa i dhihin "maca-salaama", jawaab kalena aanan iga sugin; wuxuuse si la-yaab leh u sii lahaa oo aan maqlayay:" Soomaalidu waa dad waalan, Allana uu siiyay dhul "Janno" ah...may heshiiyaan, iska-qabtaan kuwa uu damucu wado, aayarna isaga dhuuqaan barwaaqada uu "Raxmaanku" ugu deeqay ?..maxay ahayeen dadku ?!!!.
Markii uu Odaygu iga dhaqaaqay, baan keligay isla hadlay; waxaan soo xusuustay heesihii Hobollada Qaranka ee "Dhulkaayagiiyow", "Arligaygow" iyo kuwa kale. Waxaan is-arkay anigoon is-ogayn oo ku luuqaynaya ereyo ku jiray heeso jacayl ahaa, laakin timaamaya quruxda, bilicda, muuqaalka iyo barwaaqada dalka,kuwaas oo ay ka mid ahaayeen:-" Berdihii ku yiil Isha baydhabo, Haakaba bannaanshee, Beledweyn Allahayow ka dhig guri barwaaqo, Liibaantii Qoyooley, dhuuxii Boorama, Ceel-buur iyo Ma-ogtihiin Magaalada Muqdisheynu joognaa, sida maanta ay tahay..." iwm. Keligay ayaan ku jiriiricooday kobtii aan fadhiyay,ilaa aan ku baraarugay Aadaankii Salaadda Maqrib.
WQ/ Muxyaddiin M.Kaalmoy -kalmoi@hotmail.com
Faafin: SomaliTalk.com | July 23, 2007